9 Ndudue Page Mmejọ I Kwesịrị Izere | Martech Zone
Ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ ihe na-adọpụ mmadụ uche na ibe ha rutere. Bọtịnụ, igodo, onyogho, isi okwu, okwu gbara ọkpụrụkpụ… ha niile dọọrọ mmasị onye ọbịa. Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ uru mgbe ị na-achọpụta ibe ma jiri nwayọ wepụta ihe ndị ahụ maka onye ọbịa wee soro, ịgbakwunye ihe na-ezighi ezi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka onye ọbịa ahụ pụọ na oku na-akpọ omume ị chọrọ ka ha pịa. ma gbanwee na.
Copyblogger wepụtara akwụkwọ ozi a mara mma nke na-emepụta ihe atụ n'etiti ndị ọbịa na saịtị gị na onye na-eso ụzọ, 9 Ntọala Ntanetị nke Na-eme Ka Lo Ghara Businesszụ ahịa. M hụrụ ihe atụ a n'anya n'ezie n'ihi na ọ dabara adaba ka ị na-eche maka njem ị na-aga.
Ihe mbu anyi n’eme njem bu map ebe mbido ya na ebe njedebe ya, wee nye uzo kacha di nma n’etiti. Mgbe ị nọ nkewa maapụ peeji gị, Olileanya ị na-eme otu ihe - na-eche echiche banyere ebe ndị ọbịa gị na-abịa ma hapụ ajụjụ ọ bụla dịka ebe a na-aga. Ndị a bụ 9 emehie ihe ị nwere ike ime mgbe ị na-eke peeji nke ọdịda (mana ị kwesịrị izere):
Not kọwaghị ya uru nke ntughari.
Nyeghị a ụzọ dị mfe maka ntụgharị.
I gosipụtaghị nke ọma a otu ebe ma ọ bụ nsonaazụ.
Did chọghị kwue ozi di nkpa n'ụzọ dị irè.
Did chọghị kpochapu ọdịnaya na-enweghị isi.
I jirila oke jargon na okwu mgbagwoju anya.
Kwadoghị ọdịnaya gị na data, nkọwa na nleba anya na mee ka ikwesị ntụkwasị obi gị dịkwuo mma.
Did chọghị wepu uzo ozo dị ka igodo na njikọ ndị ọzọ.
Chọpụtaghị na peeji ọdịda gị eburu ngwa ngwa!
Tags: okwu mgbagwoju anyantughari uruoyiriebejargonisi oziimebe peejiọdịda peeji goofsọdịda peeji nke infographicọdịda peeji mmejọọdịda peeji nke njikarịchaụzọ ntụgharịna-akwado ọdịnayatestimonialsoke ọdịnaya
Etu esi abanye data na-enyere Multi-Channel Marketing aka